ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွင့်ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် ငွေကြေးရရှိစေနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးခန်းတွင် "ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွင့်ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် ငွေကြေးရရှိစေနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး" အခန်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ. . .
ICA SME-TSL Seminar For MSME Naypyitaw
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော JICA SME-TSL Seminar အခမ်းအနားပွဲသို့ MSME Association ​၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ တတ်ကြွစွာ ပါဝင်တတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတတ် နှင့် MSME Association တို့ တွေ့ဆုံပွဲ
စည်ပင်ဘဏ်လီမိတတ် (ရုံးချုပ်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတတ် နှင့် MSME Association တို့ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတွင် နေပြည်တော် ဒုတိယမြို့တော်ဝန် နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတတ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးရဲမင်းဦးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး နေပြည်တော် စည်ပင်ဘဏ်လီမိတတ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှ JICA (Two Step Loan)...
MSME Association ၏ အလုပ်အမှု့ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လယ်ဝေးမြို့နယ်အသင်းသားများတွေ့ဆုံပွဲ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ . . .
MSME Association ၏ အလုပ်အမှု့ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လယ်ဝေးမြို့နယ်အသင်းသားများတွေ့ဆုံပွဲကို ယနေ့ မနက် (၁၀:၀၀) န...
MSME Association ၏ အလုပ်အမှု့ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒက္ခိဏမြို့နယ်အသင်းသားများတွေ့ဆုံပွဲ
MSME Association ၏ အလုပ်အမှု့ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒက္ခိဏမြို့နယ်အသင်းသားများတွေ့ဆုံပွဲကို ယနေ့ ညနေ (၄:၀၀) နာရ...
© MSME. All Rights Reserved.